Isbedelada xiisaha leh waxay ku imaanayaan Xfce 4.10, aan aragno qaar | Laga soo bilaabo Linux
Dhowr maalmood ka hor liiska Xfce ku dhawaaqay in codsiyada qaarkood la heli karo kuwaas oo kaliya horudhaca waxa aan ku geli doonno Xfce 4.10.
Kadib markaan sugo bal inaan arko archlinux way ka mid ahaayeen (taas oo aysan sameyn), Waxaan ku soo gabagabeeyey ururinta iyo ku rakibidda baakadaha qaarkood gacanta, waana sababta aan u qorayo maqaalkan. Si tartiib tartiib ah ayaan u soo dejinayaa baakadaha la sii daayay oo aan ku rakibayaa gacanta, laakiin aan dib ugu laabanno waxa aan la macaamilayno. Isaga App Finder (Codsade Finder) Tusaale ahaan, waxay heshay horumarin aad u khuseysa, inkasta oo aysan weli gaarin meeshii ugu sarreysay ee wax lagu rido sida Docky o KRunner. Aan aragno qaar ka mid ah.
Bilowgii codsigan wuxuu badalayaa midka duugoobay Xfrun, marka markaan riixno [Alt] + [F2], App Finder Waxay daryeeli doontaa hawsha bilaabista codsiyada waana wax la yaab leh sida ugu dhakhsaha badan ee ay u qabato.
Waxaan ku qori karnaa magaca dalabka, ama si fudud ugu raadsan karnaa hadba qaybtiisa annagoo soo bandhigeyna daaqadda fallaarta ka muuqata dhinaca midig:
Tani waxay samaysaa Xfce un Deegaanka Desktop wax badan oo la heli karo oo la isticmaali karo. Waxaan si dhakhso leh u heli karnaa codsiyada (wuu dhib qabaa Dash).
Marka laga hadlayo guddi, oo ahaa codsi labaad oo aan rakibo, waxaan ka heli karnaa xoogaa isbeddello ah Items (Tufaaxa). Tusaale ahaan hadda waxaan isticmaali karnaa liiska Kalfadhi sida Ubuntu o Gnome-Shell.
Laakiin waxaan sidoo kale u qaabeyn karnaa si aan u muujino kaliya waxa aan u baahanahay, ama waxaan dooran karnaa liiska badhamada halkii aan ka dooran lahayn menu.
Waxaa jira isbeddelo badan oo badan iyo cilladaha cayayaanka, laakiin si tartiib tartiib ah ayaan u ogaanayaa. Waxa aan arko waa taas shaki la’aan Xfce Way isbeddelaysaa iyada oo aan lumin fududaanta lagu garto taasna aad ayaan u jeclahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Isbedelada xiisaha leh waxay ku imaanayaan Xfce 4.10, aan aragno qaar
Waxa muhiimka ah ee dhammaantiis in aanu luminayn fududaantiisa iyo, isbeddeladani waxay umuuqdaan kuwo aad u wanaagsan.
Waxay umuuqataa mid aad iyo aad ufiican. Waxaan u adeegsadaa biraawsarka arjiga maalin kasta, laakiin haddii ay ku daraan xfrun oo ay horumariyaan, waxay noqon doontaa wax soo saar badan, wax weyn.
Hagaag, uma aanan isticmaalin [Alt] + [F2] sida aan hada u isticmaalo oo rakibisteeda waa mid aad u fudud 😀
Ninka Elav ee daabacaadda badan ee Xfce waad iga dhigaysaa inaan markale isku dayo mar kale!
Nin yahow waxba iskama lumiso isku dayga .. waan kaa tegayaa sidee miiskeygu u egyahay hada si aad u aragto sida qabow 😀
Tufaaxa kal-fadhiga ayaa horey u jiray 4.8. Waxa cusubi waa in la doorto waxyaabaha tagaya ama aan meesha oollin. Laakiin horeyba way u jirtay. Waxaan hayaa 4.8 waxaanan hada arkaayaa 🙂
Maxaad sugeysaa, ma sugi karo inaan ku raaxeysto Xfce 4.10. Waxaan ka tagay Linux Mint 12 maxaa yeelay, in kasta oo ay shaqeynayaan oo qurux badan yihiin, codsiyada waxay qaataan waqti in la furo, ogeysiisyada waa isku buuqsanyihiin mana fahmin sababta markaan daaqad cusub u furo aysan isla markiiba uga muuqan baararka daaqadaha furan. Hadda waxaan la joogaa Xubuntu, qaybinta oo aan ahayn wixii aan ku aqaannay nooca 9.10. Aad baan u faraxsanahay waxaanan rajaynayaa in nooca soosocda horeyba ula yimid Xfce 4.10. Anigu ma weydiinayo Thunar tabs, waxaan jeclaan lahaa shaqada guddi qaybinta laba sida Nautilus's F3 function sameeyo. Waa waxa kaliya ee aan tebay. Hirgelinteedu kama dhimayso Thunar (iyo desktop), sida tabku u shaqeyn lahaa. Sikastaba, waan jeclahay Xfce inbadan iyo in kabadan waxaanan rajaynayaa inaan ku raaxeysto nooca cusub bisha Maarso. Haddii aan aqoon lahaa barnaamijyada iyo waxaas oo dhan, waxaan geli lahaa mashruuca si aan uga caawiyo hagaajintiisa.
Waxaan nahay isku mid. Waxaan dib ugu noqday Xubuntu maxaa yeelay waxaan necbahay Midnimada (PC-gaagu maahan Tablet). Waxaan isku dayay reexaanta iyo inkasta oo ay qurux badan tahay haddana aad bay uga gaabisay jeclahay. Laakiin waa run! Xubuntu wax weyn ayuu qabanayaa hadda. Adiguna sidiinii ayaan sugayaa xfce 4.10
Waxaan weydiiyaa Thunar tabta la nacladay. In kasta oo aan sii wadi karo isticmaalka Nautilus waxay ila tahay aniga inay yareyn doonto waxqabadka wanaagsan ee aan hadda haysto. Waan arki doonaa haddii aakhirka ay garwaaqsadaan in tabsku ay lagama maarmaan yihiin oo lagu daro.